10 यूरोपमा परिवार शिविर गन्तव्यहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 यूरोपमा परिवार शिविर गन्तव्यहरू
पढ्ने समय:7मिनेट(Last Updated On: 12/03/2021)
हरियो घाटी, विशाल घाटी दृश्य, समुद्र तट, वा आकर्षक शहरहरू, यूरोप पारिवारिक शिविरका लागि आश्चर्यजनक ठाउँहरूले भरिएको छ. को 10 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो परिवार शिविर गन्तव्य को लागी सही छन् गर्मिको बिदा, र जाडो पनि. सबै मनमोहक दृश्य र प्रकृतिले घेरिएका छन्, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यूरोप मा एक अविस्मरणीय पारिवारिक बिदाको लागि डिजाइन.
1. अस्ट्रियामा सर्वश्रेष्ठ परिवार शिविर गन्तव्य: उच्च टोरेन
कथा जस्तै शहरहरू, सुन्दर घासको मैदान, र आल्प्स परिदृश्य, को राष्ट्रिय निकुञ्ज Hohe Tauren हाम्रो माथि छ 10 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो परिवार शिविर गन्तव्यहरू. उदाहरणका लागि, यस क्षेत्रका सब भन्दा राम्रा शिविर स्थलहरू मध्ये एक ग्रोसग्लner्कर हो जुन प्रसिद्ध ग्रसग्लग्नर पर्वतलाई हेरेर अस्ट्रियामा सब भन्दा माथि छ।.
साथै, पूर्वी तिरोलको इनरग्स्क्लोसमा आल्प्सको सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरू छन्, निश्चित रूपले पारिवारिक रोमांच र चित्रहरूका लागि उत्तम स्थानहरू मध्ये एक हो. Another Hohe Tauren highlight is the 600-year-old larch forest of Zedlach, जहाँ तपाइँaको लागी आश्चर्यजनक ठाउँहरू पाउनुहुनेछ परिवार पिकनिक.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, Hohe Tauren राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिवार शिविर सम्पूर्ण परिवारको लागि अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ. सबै माथि बन्द गर्न, तपाईको हरिया बिदालाई अष्ट्रियामा इको-मैत्री आईसीई ट्रेन द्वारा यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुनेछ.
2. फ्रान्स मा सर्वश्रेष्ठ परिवार शिविर गन्तव्य: डोर्डोग्ने उपत्यका
भव्य Dordogne उपत्यका मा, क्याम्पि Le ले पोन्टेट सही ईस्इल नदीमा छ र सुन्दर पेरिगोर्ड चौकाको नजिक छ. ले पोन्टेट, तपाईंले शिविर क्षेत्र र मोबाइल घर भाडाको साथ एक अद्भुत 3-स्टार परिवार शिविर फेला पार्नुहुनेछ. त्यसैले, बच्चाहरू तालमा छरपस्ट हुँदा, तपाईं माछा मार्न वा सूर्यका आनन्द लिन सक्नुहुनेछ. तुलनामा, तपाईं दृश्य दृष्टिकोण गर्न र Dordogne घाटी सँगै प्रशंसा गर्न सक्छ – पारिवारिक फोटोहरूको लागि उत्तम.
Le Pontet परिवार शिविर रोन-आल्प्स को सुन्दर क्षेत्र मा छ, अर्डेचे गोर्जेसको नजिक प्रकृति रिजर्व. त्यसैले, तपाईंसँग वन्य प्रकृतिको अन्वेषण गर्ने समय हुनेछ, पैदल यात्रा र साइकलिंग जस्ता शानदार बाहिरी गतिविधिहरू, र केवल सूर्य र ताजा हावा भिजेको.
युरोप मा एक सुन्दर तट मा, ब्रिटनीमा टाय नादान सही समुद्री किनार परिवार शिविर स्थल हो. टाय नादान क्याम्पि site साइटको भत्ताहरू मध्ये एउटा स्थान ठाउँ प्रकृति र समुद्र तटलाई मिल्दछ. त्यसैले, तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई समुद्र किनारमा लैजाने बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, स्यान्डकास्टलहरू निर्माण गर्नुहोस् र सूर्यास्त हेर्नुहोस्, क्यानोइing गर्न वा रूख चढ्ने. यो शिविर स्थल मात्र छ 20 ब्रिटनी मा समुद्री तट बाट मिनेट.
यसबाहेक, the campsite is great forafamily vacation with small children and babies. Thanks toababy gear pack and kids’ बेलुका मनोरञ्जन. त्यसैले, तपाईं पक्कै पनि एक अविस्मरणीय पारिवारिक शिविर समय ब्रिटनी को प्रसिद्ध तटहरु मा हुनेछ.
4. नेदरल्याण्डमा शिविर प्लेस: गेलडरल्याण्ड
फूल ट्यूलिप र Veluwe को लागी घर, गेलडरल्याण्ड नेदरल्याण्ड्स मा एक अद्भुत परिवार शिविर गन्तव्य हो. तपाइँ र बच्चाहरु बिल्कुल Veluwe राष्ट्रीय पार्क प्रेम र वन्यजन्तु, र 200 Appeltern को बगैचा.
जटबर्ग र अक्रेस्ट्याट मात्र हो2जेलडरल्याण्डमा धेरै शिविरहरूको, जहाँ तपाईं आफ्नो कारवां वा पाल पार्क गर्न सक्नुहुन्छ. नेदरल्याण्ड्स पारिवारिक बिदाको लागि अद्भुत गन्तव्य हो, ठ्याक्कै किनभने त्यहाँ बच्चाहरू वा बच्चाहरू र किशोर किशोरीहरूको साथ अन्वेषण गर्न धेरै धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्.
5. बभेरिया जर्मनीमा सर्वश्रेष्ठ परिवार शिविर
डेन्यूब नदी र फ्रान्कोनिया दाखबारीहरूका लागि घर, बवेरिया परिवारहरूका लागि अद्भुत शिविर स्थल हो. कल्पना गर्नुहोस् तपाईंको कारवां वा पालबाट बाहिर निस्किनुहोस्, खुशीको दाखबारीमा, प्रकृतिमा पारिवारिक रोमांचको एक दिन पछि.
पहाडहरूमा साइकल गर्दै वा वरिपरि घुम्दै बबेरियन जंगल, वन्यजन्तुको खोजी गर्दै, पुतलीहरू, र दुर्लभ चराहरु – बावरिया एक गृष्म गर्मी शिविर गन्तव्य हो. साथै, तपाईं क्षेत्र आश्चर्यजनक तालहरू भरिएको पाउनुहुनेछ, युवा शूरवीर र राजकुमारीहरूका लागि न्युस्वान्स्टाइन महल, उत्तम परिवार गर्मी बिदा पूरा गर्न.
6. कालो जंगलमा परिवार शिविर
चराको आँखाबाट वा जंगलमा गहिरो, जर्मनीको कालो ज forest्गल विश्वको सबैभन्दा रमाईलो र सुन्दर प्रकृति भण्डार हो. तपाईंले ब्ल्याक फरेस्ट क्षेत्रमा धेरै क्याम्पिंग साइटहरू फेला पार्नुहुनेछ किनभने क्याम्पिंग जर्मनीमा धेरै लोकप्रिय छ.
त्यसैले, तपाईं आफ्नो शहरलाई नजिकैको शहरहरूमा पार्क गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ, वा सुन्दर ताल र पहाड. उदाहरण को रुपमा, Titisee द्वारा Campingplatz Weiherhof एक आराम परिवार छुट्टी को लागी उपयुक्त छ, जबकि वुल्फ्याच क्याम्पसाइट पर्वतारोहण र साइकलिंग परिवारको लागि आदर्श हो.
7. टस्कनी इटालीमा परिवार क्याम्पि।
टस्कनीमा क्याम्पिंग तपाईंको सबैभन्दा स्वादिष्ट पारिवारिक बिदा हुनेछ. रेशमी हरियो पहाडहरू, दाखबारी, स्थानीय चीज, र ट्रफल्सले टस्कनीलाई पाक स्वर्ग बनाएको छ. त्यहाँ पाठ्यक्रमका बच्चाहरूका लागि पनि पास्ता र पिज्जा छन्, जबकि अभिभावकहरूले धेरै स्थानीय पकवानहरूको आनन्द लिन्छन्.
मनमा यो संग, टस्कनीले सम्पूर्ण परिवारका लागि धेरै रमाईलो गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै पानी पार्क. यहाँ तपाईं पछाडि बस्न सक्नुहुन्थ्यो जब बच्चाहरू पानीमा छ्याप्छन्, तपाईंको दिन-यात्रा पछि नजिकैका शहरहरूमा, पिसा र सिएना.
एक शब्दमा – आदर्श, Tuscany यूरोप मा एक महान परिवार शिविर गन्तव्य हो, वास्तवमा लुकेको शिविर रत्न.
8. स्विजरल्याण्ड मा सर्वश्रेष्ठ परिवार शिविर गन्तव्य: स्विस अल्पाइन लेकसाइड
लक्जरी शिविर वा तपाईंको आफ्नै पाल वा भ्यानमा, स्विस आल्प्स छ आश्चर्यजनक झलकहरू ठाउँहरू and budget-friendly family camping places. If you are planning family camping in the summer, त्यसो भए स्विस आल्प्समा आरोला क्याम्पिंग साइट उत्तम छ, किनकि यो पहाडमा माथि अवस्थित छ. यहाँ तपाईं संग हुनेछ लुभावनी दृश्य, चिसो तापक्रम, र प्रशस्त पैदल यात्रा ट्रेल्स.
तथापि, यदि तपाईं अधिक आरामदायी अनुभव रुचाउनुहुन्छ भने, त्यसोभए तालको किनारमा शिविर राख्न उपयुक्त छ. पहिले, यदि यो तातो छ भने, तपाईं केवल तालमा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ. दोश्रो, तपाईं सुन्दर दृश्यहरू हुनेछ, तपाईंको शिविरबाट धेरै टाढा यात्रा नगरी.
तलको रेखा भनेको स्विस आल्प्सले यति धेरै बिभिन्न शिविर ठाउँहरू प्रस्ताव गर्दछ. सक्रिय छुट्टीमा आरामबाट, लेकफ्रन्ट वा हिमाल दृश्य – सबै आश्चर्यजनक.
9. इटालीमा सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक शिविर गन्तव्य: गार्डो तालमा ब्रियोन क्याम्पसाइट
Garda तालको टाउकोमा, 4-स्टार क्याम्पिंग ब्रियोन इटालीको काल्पनिक परिवार शिविर स्थल हो. तालको दृश्यहरू हेर्दै, पौडी खेल्दै, वा तपाईंको पछाडि विश्वको सबै भन्दा उत्तम स्थानहरू मध्ये एकको साथ पालको खाना खानुहुन्छ, परिवार रमाईलो को लागी आदर्श नुस्खा हो.
क्याम्पि Br ब्रियोनसँग छ 20 पाल, र 39 भाडाका लागि मोबाइल घरहरू, बिजुली, र अद्भुत सुविधाहरू, बच्चा कोठा सहित. यदि तपाईंको परिवार सक्रिय sportive एक हो, त्यसोभए तपाईं साइकल भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र ताल र हिमालहरूको वरिपरि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, वा पानी क्रीडा मजा लिनुहोस्. अर्कोतर्फ, तपाई केवल शिविर साइट वा तालको बीचको छेउमा पोखरीबाट चिल गर्न सक्नुहुन्छ र आरामदायी पारिवारिक समय पाउन सक्नुहुन्छ.
10. यूरोपमा क्याम्पिंग गन्तव्यहरू: भर्डन घाटी
गोर्जेस डु भर्डनको किनारमा, किशोर-किशोरीहरू र बच्चाहरू-मैत्री क्याम्पसाइटहरूमा, ताल दृश्यहरू वा लक्जरी क्याम्पिंग परिसरमा, गोर्जेस डु भर्डनमा परिवार शिविर कहिल्यै रोमाञ्चक कहिल्यै भएको छैन. गोर्जेस डु वर्डन संसारकै सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रकृति भण्डार हो, र गर्मी मा परिवार शिविर को लागी सही.
घाटी र तालहरूमा यसको निकटताको लागि धन्यवाद, सम्पूर्ण परिवारको लागि धेरै पानी खेल गतिविधिहरू छन्. उदाहरणका लागि, त्यहाँ पानी पार्क र पोखरीहरू छन् यस क्षेत्रमा धेरै जसो शिविरहरूमा, त्यसोभए तपाईं पूलबाट आराम गर्न सक्नुहुनेछ. एउटै समयमा, तपाईं कुनै एउटा उत्तम पर्वतारोहण ट्रेल्समा अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ, अद्भुत प्रकृति आरक्षित मा.
सारांशमा भन्नुपर्दा – केवल तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस् भर्डन घाटी शिविर र अग्रिम बुकिंग, यो पारिवारिक क्याम्पिंग को लागी एक धेरै लोकप्रिय स्थान हो, र तपाईं एक विस्फोट हुनेछ.
एक ट्रेन संग मार्सिलस लाई राम्रो लाग्यो
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई तपाईंको यात्रा योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 रेल द्वारा युरोपमा सर्वश्रेष्ठ परिवार शिविर गन्तव्यहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० युरोपमा सर्वश्रेष्ठ परिवार क्याम्पिंग गन्तव्यहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3Dneاور - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
शिविर CampingDestinations CampingDestinationsEurope Campingwithkids Familycamping Familytripeurope LuxuryCampingEurope पाल